कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा त्रिपक्षीय भिडन्त
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, धनगढीको निर्वाचनमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको यही पुस २८ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि तीन जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । संघका पूर्वमहासचिव रहेका रूपेश स्वाँर, पूर्वकोषाध्यक्ष पुष्प कँुवर र पूर्वसदस्य डिल्लीराज अवस्थी स्वतन्त्र प्यानलबाट अध्यक्षका दावेदार रहेका हुन् । तीनै जना उम्मेदवार चुनावी प्रचार–प्रसारमा आ–आफ्ना मतदातासँग मत माग्न व्यस्त छन् ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको समाधान खोजौं
पछिल्लो समय विश्वभर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई निकै चासो र चिन्ताको विषय बनाइएको छ । किनकि यसको प्रभावका कारण कालान्तरमा मानवजातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको भूमिका नगन्य छ, तर जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लँदै गएको छ । सेता हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन् । हिमनदीहरू सुक्न थालेका छन् । हिमपहिरो जाने खतरा बढिरहेको छ ।
निर्यातकर्तालाई पनि नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ
काठमाडौंमा जन्मेका स्वयम्भूरत्न तुलाधरले एमएस्सी अध्ययन पूरा गरेपछि सन् १९७७ मा हेटौंडास्थित दामनको हर्वल फार्ममा प्राविधिकका रूपमा काम सुरु गरेका थिए । अनुसन्धानमा रुचि भएका उनले त्यसपछि केही समय वनस्पति विभागमा बसेर काम त गरे, तर अनुसन्धान नगर्ने भएपछि उनमा सरकारी जागिरको मोह रहेन । सरकारी जागिर छाडेर १९७९ मा याक एन्ड यती इन्टरप्राइजेज कम्पनीमार्फत हस्तकला व्यवसायमा हात हालेका उनी अहिले हस्तकलाका सामान विदेश निर्यात गर्नमा व्यस्त छन् ।
२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले दिएको पीडासँगै गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिमा कम्पनीहरू समेत थपिएपछि केही वर्षयता बिमाबारे छलफल बढ्नुका साथै पहुँच विस्तारबारे बहस सुरु भएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त औजारका रूपमा लिइने बिमाको पहुँच विस्तार त्यति उत्साहजनक छैन । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा करिब ५२ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३९ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका थिए । नयाँ कम्पनी थपिएपछि प्रिमियम वृद्धि भएको हो ।
नेपालको राज्यसत्ता सधैं दोबाटोमा बसेको छ
नेपालको समसामयिक राजनीति, अर्थतन्त्र र वैदेशिक मामिलाका बारेमा तिखो विश्लेषण गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्, अरुण सुवेदी । पछिल्लो समय देशमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढेको बताउने उनी राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा अलमलमा रहेको बताउँछन् । स्थिरता र बलियो सरकार मात्रैले आर्थिक समृद्धि नहुने बताउने उनी वर्तमान सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्छन् । देशको अर्थतन्त्र सधैं ‘दोबाटो’मा रहेको बताउने उनै सुवेदीसँग समसामयिक राजनीति र आर्थिक विषयसँग केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलाल र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :
निजी क्षेत्रलाई माथि उकास्न सकारात्मक सोचको खाँचो छ
१४ वर्षको उमेरदेखि नै व्यापार–व्यवसायमा लागेका कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जंगबहादुर मल्ल आगामी माघमा हुने १६ औं कार्यकारिणीका लागि अध्यक्षका प्रबल दावेदार हुन् । १८ वर्षको उमेरमा कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघमा मतदाताका रूपमा प्रवेश गरेका मल्ल अहिलेसम्म निरन्तर संस्थामा जोडिएका छन् । २०५७ सालमा संघको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी भएका मल्ल त्यतिबेला समितिमा सबैभन्दा कान्छा थिए ।
भिजिट नेपाल–२०२० : ‘मिसन’ २० लाख पर्यटक
सरकारले सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल’ वर्ष घोषणा गरेको छ, जसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अभियानसमेत सुरु भएको छन् । २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखिएको ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ का लागि विभिन्न समितिसमेत निर्माण हुने चरणमा छन् । निजी क्षेत्र उत्साहितसमेत छन्, जसलाई सफल पार्न सबैले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा रेल सञ्चालन कति सम्भव ?
पछिल्लो समयमा नेपालमा रेल निर्माणबारे चर्चा परिचर्चा छ । हालै काठमाडांै उपत्यकाको रिङरोडमा मोनोरेल निर्माणका लागि चिनियाँ रेल्वे कम्पनीसँग अध्ययनका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्मको मेट्रोरेल अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै राष्ट्रिय स्वार्थ र इथिक्सका कुरा बिर्से
दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएको नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनासम्ममा विकास खर्च जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित छ । विकास र समृद्धिको नारालाई पछ्याउँदै सरकारले सात दशकदेखिको राजनीतिक सक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेको बताए पनि जनता भने वर्तमान सरकारप्रति निराश हुन थालेको अर्थविद् डा. रघुवीर विष्ट बताउँछन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको र नेतृत्वदायी पदमा पुगेकाहरूले नै राष्ट्रिय स्वार्थ र नैतिकतालाई बिर्संदा मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. विष्ट पेसाले प्राध्यापक हुन् ।
पुँजीबजार तरलता प्रशोचन गर्ने प्रोडक्ट होइन
मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न अर्थमन्त्रीले गठन गरेको समितिको सदस्यका रूपमा रहेर काम गरेका अम्बिकाप्रसाद पौडेल हाथवे इन्भेस्टमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत हुन् । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताको हकहितका लागि आवाज उठाउने संस्था इन्भेस्टर्स फोरमको नेतृत्वसमेत उनले सम्हालेका छन् ।
लेखकहरू व्यावसायिक बन्ने बाटोमा
नेपाली बजारमा लेखकको इतिहास छोटो छ । २०४६ सालसम्म जेनतेन विभिन्न लेखकले आफ्नो वलवुताले भ्याएसम्म पुस्तक प्रकाशन गर्ने र आफ्ना साथीभाईलाई वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि विस्तारै लेखकले समय परिस्थितिअनुसार लेखन शैलीमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने क्रममा नेपालको विगत करिब एक दशकदेखि लेखकहरू पनि व्यावसायिक हुन थालेका छन् । २०४६ सालपछि पत्रपत्रिका प्रकाशन सुरु भएसँगै लेखनको पनि विकास भएको हो ।
व्यापारीको हितमा काम गर्ने संघ नै अहिले बिरामी परेको छ
रुकुम उद्योग वाणिज्य संघ ५ महिनादेखि बन्द छ । संघभित्र अनियमितता भएको विषयलाई लिएर जिल्लाकै व्यापारीले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि अहिले सबै काम ठप्प भएको छ । जिल्लामा ४ हजार व्यवसायी भए पनि संघमा तालाबन्दी भएपछि अहिले व्यवसायीको हकहितका लागि कुनै काम हुन सकेको छैन ।